Torohevitra hitsidihana ny Alhambra any Granada | Vaovao momba ny dia
Tsidiho ny Alhambra any Granada
Susana Garcia | | General, Granada
La Alhambra any Granada dia iray amin'ireo tsangambato manan-danja indrindra any Espana, noho izany dia mila fitsidihana feno sy voalahatra mba tsy ho tara amin'ny zoro rehetra. Ity toerana ity dia tsy isalasalana fa fitsidihana tsy hay hadinoina ary noho izany dia tsy afaka manao ny zava-drehetra amin'ny minitra farany isika. Ankoatr'izay dia toerana malaza be izy io ary noho izany dia tsara kokoa ny maka mialoha ny tapakila.
Ho hitantsika eo hanao ahoana ny fitsidihana ny Alhambra any Granada ary inona no atolotry ity tsangambato ara-tantara mahafinaritra ity ho antsika. Tokony hahalala kely momba ny tantarany sy izay momba azy koa isika, satria izy dia be pitsiny goavambe. Ny torohevitra momba ny fitsidihana dia ampahany lehibe hafa koa.
2 Ahoana ny fomba ahazoana
3 Alohan'ny hidirana
4 Ny fitsidihana
Ao amin'ny Ny havoana Sabika no nananganana ilay kompania Alhambra. Io no teboka avo indrindra amin'ny tanàna antsoina hoe Gharnata, toerana iray stratejika hanjakan'ny manodidina amin'ny fiarovana nefa koa hanomezana lafiny iray amin'ny fahefana sy ny fahamboniana. Midadasika ny tantarany, hatramin'ny taonjato faha-XNUMX dia namorona lapa mimanda teo amin'io havoana io ilay mpitsidika, Yusuf ibn Nagrela. Nandritra ny taonjato faha-XNUMX, tao Nasrid Granada Muhammad ibn Nasr dia nibodo ny lapan'ny Rooster of the Wind, araka ny fantatra ny lapa teo aloha. Nandritra ny taonjato maro, ny Alhambra dia nitarina tamin'ny lapan'andriana, fiarovana, zaridaina ary trano heva. Tao anatin'ny taonjato telo dia nofaritana ny mombamomba ny fizarana Alhambra, miaraka amin'ny Alcazaba, ireo lapa ary ny faritra an-tanàn-dehibe.
Ahoana ny fomba ahazoana
Ny Alhambra dia azo aleha amin'ny fomba samihafa avy any amin'ny tanànan'i Granada. Amin'ny tongotra dia misy lalana roa avy eo afovoan-tanàna. Afaka miakatra avy any amin'ny Plaza Nueva amin'ny alàlan'ny Cuesta Gomérez isika miaraka amin'ny halavirana iray kilometatra mahery monja mankany amin'ny fidirana. Handalo ny Puerta de las Granadas isika ary koa hamaky ireo làlana. Fitsangatsanganana an-tongotra iray hafa no mitondra anay manaraka ny Cuesta del Rey Chico avy ao amin'ny Paseo de los Tristes ivelan'ny rindrina. Raha tsy te-hitsangatsangana an-tongotra isika satria somary mitongilana kely dia afaka mandray bus bus isika, satria misy tsipika maromaro mankany amin'ny Alhambra. Ny tsipika C30, C32 na C35 dia manatanteraka ny zotra. Ho fanampin'izay, afaka misafidy ny hiakatra amin'ny taxi na fiara ianao, satria misy toeram-piantsonana akaikin'ny faritry ny biraon'ny tapakila.
Alohan'ny hidirana ao amin'ny Alhambra dia mila manisa zavatra vitsivitsy isika. Zava-dehibe ny mampahafantatra mialoha ny momba anao momba ny fandaharam-potoana sy ny tahan'ny, toy ny misy karazana tapakila sy fotoana samihafa hahitana fizarana samihafa. Ny tapakila dia azo alefa an-tserasera ary azo atao tsirairay na miaraka amin'ny vondrona. Tsy avela ny biby afa-tsy ny alika mpitari-dalana ary ilaina ny hitazomana ny ankizy hiaraka amin'ny ray aman-dreniny hisorohana azy ireo tsy hikasika ny haingo na ho very. Etsy ankilany, azo atao ny manao fanaraha-maso amin'ny fitsidihan'ny tsirairay. Ato amin'ny tranokala Alhambra dia hitantsika hoe iza avy ireo karazana làlana, fandaharam-potoana ary sarany azontsika araraotina.
Rehefa mitsidika ny Alhambra ianao dia matetika misafidy ny modality an'ilay be pitsiny, izay azo tsidihina amin'ny maody na alina. Ny fitsidihana an'ity toerana ity dia misy ny Alhambra, ny tranon'ny Nasrid, ny Generalife, ny lapan'i Carlos V ary ny fandroana ny Moskea.
Tsy misy isalasalana fa tsy te-tsy hahita na inona na inona amin'ity fitsidihana ity isika, na dia tokony ho ao an-tsaina aza fa mila manokana adiny telo farafahakeliny isika hahita ny zava-drehetra am-pilaminana. Tao an-tanànan'ny Alhambra dia afaka nahita lapa sy trano lehibe tsy tambo isaina izahay. Ankehitriny ny Faritra Nasrid Palaces io dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny napetraka. Amin'ity toerana ity no ahitantsika ny Palacio de Comares izay ahitantsika ny Patio de los Arrayanes sy ny dome an'ny Sala de Dos Hermanas miaraka amin'ny haingo mahafinaritra. Ao amin'ny Palacio de los Leones no ahitantsika ny iray amin'ireo sary mampiavaka an'i Alhambra, miaraka amin'ny Patio de los Leones, izay misy ilay Loharano Liona malaza.
Ny lapan'i Carlos V, natsangana taonjato maro taty aoriana, dia trano iray hafa mendrika tsidihina. Voaravaka amina fomba fanao no ahitantsika trano fonenana kanto. Misongadina ny tokotanin'ny lapa sy ny fazade. ny Generalife dia iray amin'ireo faritra tsara indrindra amin'ny Alhambra, satria toerana natao hialana sasatra izy, noho izany dia miavaka ny zaridaina mahafinaritra. Ao amin'ilay sarotra misy monja dia afaka misoratra anarana ihany koa isika amin'ny hetsika sasany izay atao indraindray, ary ny sasany aza natao ho an'ny ankizy kely. Etsy ankilany, manana tranombakoka izy ireo ahafahantsika mianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny Alhambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tsidiho ny Alhambra any Granada
Toerana tsara indrindra hahitana ny filentehan'ny masoandro